Pamusoro Masere Mafaro Okushandisa GitHub - Semalt Expert
. Iri basa rekugadzirira rine zvinhu zvisingaenzaniswi zvakadai semashandisi ekugadzirisa basa uye web-based graphical interface.
Iyo inoshandisa purogiramu yemagetsi mumapurogiramu emitauro yakawanda uye inochengetedza shanduko dzakagadziridzwa kuti dzidzoke. Iyo inewo zvinhu zvakabatanidzwa zvakadai saWikis uye kugadzirisa chirwere. Kubatsira kukuru kwekushandisa GitHub kunokurukurwa pasi apa - wohnungs suche z?rich.
1. Zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinowanikwa:
GitHub inopa zvose zvigadziriro uye zvakarongwa uye yakakodzera-kushandiswa nevashandi nevasiri vadzidzisi. Iwe unogona kusarudza urongwa hunobva pane zvaunoda uye unogadzira zvakasiyana-siyana-open-source software mirairo zviri nyore. GitHub inotaura kuti inopfuura mamiriyoni gumi nemamiriyoni evashandi vanoshandiswa munyika yose uye vanopfuura mamiriyoni 55 repositories, zvichiita kuti ive imwe yenzvimbo dzakakwirira dzese.
NeGitHub, unogona kuita mapurogiramu akasiyana-siyana akazaruka akadai semabhuku zvakadzika uye kuwana mhinduro kubva kune nyanzvi. Iyi purogiramu inoita kuti zvive nyore kwauri kuti uongorore hutano hwezvakagadzirwa zvako.
3. Kuratidza basa rako:
Unoda kuratidzira basa rako nekukwezva vamwe vatengi? GitHub ndiyo yakanyatsovimbika uye yakanakisisa yekushandisa mune izvi; pamwe naro, vashanduri vanogona kuratidzira basa ravo uye vanobatanidza vanyori vakawanda kana vatengi vanobva kumativi ose enyika.
4. Gadzira account yako nyore nyore:
Kana uchida kubatsirwa kubva kuGitHub, iwe unofanirwa kuumba kanda. Zvisinei, nzvimbo dzepaguru dzinogona kubudiswa uye dzakashandurwa pasina nhoroondo. Somunhu ari kubhadhara, iwe uchakwanisa kugadzirisa, kukurukura uye kugadzira zvinyorwa zvakasiyana-siyana, upe mipiro yako uye kuchinja kwekhodi yekodzero.
5. Social networking works:
GitHub inopa hukuru hwehutano hwemagariro evanhu sai wikis, vateveri, vanoda, zvikamu, zvinyorwa, uye zvekudya. Yaro inonzi social network grafu inokubatsira kuti uratidze basa rako uye inokuchengetedza kuti uratidze pane zvinyorwa zvinofambisa.
Markdown inotibvumira kushandisa shanduro yemutauro mutsva kuti tigadzire kana kunyora magwaro akasiyana. Kusiyana nedzimwewo zvigadzirwa zvinowanzoitwa, haisi kungogadzira zvinyorwa zvako mune fomu yakarongeka asiwo inozvichengetedza mumabhadharo ayo pachawo kushandiswa kwekuda kwekushandisa.
7. Tsvaga kuchinja kwemashoko akasiyana-siyana:
Kana vanhu vakasiyana vakashanda purojekiti, zvingasava nyore kuchengeta nhamba yezvose. Asi neGitHub, unogona kutarisa kuchinja uye kuchengeta zvinyorwa zvekuvandudzwa. Iyi software inoshanda zvakafanana neGoogle Drive uye Microsoft Word; pamwe neGitHub, unogona kuwana mahwendefa akasiyana eefaira uye haufaniri kudzidza mimwe mitauro yakawanda yepurogiramu zvachose.
8. Inowirirana nemajasi akasiyana-siyana:
Chimwe chezvinhu zvakasiyana zvikuru zveGitHub ndeyokuti inowirirana neGoogle Cloud uye Amazon. Uyewo, iyi software inonyatsoratidza syntax mumitauro inopfuura 150 programming uye inoita kuti basa rako rive nyore.